‘केपी ओलीको टाङमुनि छिर्ने बाटो हामीलाई किमार्थ मञ्जुर छैन’ : माधव नेपाल - Baikalpikkhabar
‘केपी ओलीको टाङमुनि छिर्ने बाटो हामीलाई किमार्थ मञ्जुर छैन’ : माधव नेपाल
नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष केपी ओलीविरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । मंगलबार राजधानीमा आयोजित आफूपक्षीय विद्यार्थीहरुको राष्ट्रिय भेलालाई सम्वोधन गर्ने नेता नेपालले आफूहरु सक्कली एमाले भएको बताउँदै भने, नेकपा एमाले हाम्रो हो, केपी ओलीको होइन । केपी ओली बीमाले हुन्, सीमाले हुन् । उनले यो पार्टी छोडेर गए हुन्छ ।’
आफूहरु ओलीको टाङमुनि नछिर्ने बताउँदै नेता नेपालले ओलीको आन्द्राभुँडी सबै थाहा भएको बताए । उनले ओलीलाई चुनौती दिँदै भने, केपी ओली सुरुदेखि गुटबन्दीमा लाग्दै आएका मान्छे हुन् । केपी ओलीका आन्द्राभुँडी सबै थाहा छ, धेरै फूर्ति नलगाए हुन्छ ।’
केपी ओलीले अनुशासनको कारवाहीका लागि स्पष्टीकरण सोधे पनि नेता नेपालको मंगलबारको प्रस्तुती ओलीप्रति थप आक्रामक देखिएको थियो । उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हाँक दिँदै भने, ‘हिम्मत छ निकाल्ने ? निकाल्नुस् त । सहेर बसिन्छ ?’
प्रस्तुत छ, माधव नेपालको भाषणको सम्पादित अंश –
हामीले असल चरित्र सिकेका छौं । अहंकारी व्यक्ति कहिल्यै काम लाग्दैनन् । त्यसो हुनाले ज्ञान छ भने बुद्धि हुनुपर्छ, बुद्धि छ भने विवेक हुनुपर्छ । ज्ञान, बुद्धि र विवेकको संयोजन हुनुपर्दछ । हामीले महाधिवेशनमा प्रष्टसँग भनेका थियौं, राजतन्त्र ढालेपछि गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । अब मुलुक फेरि पुरानो राजतन्त्रमा फर्किन सक्दैन र फर्किँन पनि दिँदैनौं । हामी पराजित गरिछाड्नेछौं । जतिसुकै केपी ओलीले साँठगाँठ र राजतन्त्रलाई साथ दिने काम गरुन्, हुर्काउन खोजून्, जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि राजनीतिको एउटा चरण पूरा गरिसकेका हामी त्यस्तो प्रयासलाई विफल पारिछाड्छौं । राजनीतिक क्रान्तिको एउटा चरण पूरा गरिसकेका हामी सामन्ती शासनलाई पराजित गरेर दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसक्यौं । आर्थिक–सांस्कृतिक क्रान्तिको दोस्रो चरणमा अगाडि बढ्दा समाजका आफ्नो ध्येय र उद्देश्य पूरा गर्ने हो ।
महत्वपूर्ण सवाल के हो भने समाजलाई चाहिएको सामाजिक न्यासहितको समृद्धि हो । समृद्धि आर्थिक विकासमात्रै होइन । त्यसैले हामीले भनेका छौं, हाम्रो व्यवस्था जनताका लागि हो । आन्दोलन लोकप्रिय हुनुपछाडिको कारण के हो ? त्यसको कारण एउटा के हो भने नेपाली जनताको नाडी उसले समातेको छ, नेपाली जनताको ढुकढुकी उसले बुझेको छ । यही ढुकढुकी बुझ्न सक्यो भने पार्टी बलियो हुन्छ । आन्दोलन पनि सफल हुन्छ र सफलताको बिन्दुमा पुग्छ । जब राष्ट्रिय राजनीतिको नाडी समात्न सकिँदैन, देश र जनताको भावना बुझ्न सकिँदैन भने त्यस्ता पार्टीहरु इतिहासको कठघरामा जानेछन् । जसरी टंकप्रसादजीले खोल्नुभएको प्रजापरिषद् इतिहासको विषय बनिसकेको छ । कतिपय देशमा जनताको भावना बुझ्न नसकेरै कम्युनिस्ट पार्टीको अवसान भइसकेको छ । त्यो बाटोमा हामी जाने होइन ।
बुधबार, ११ चैत, २०७७, बिहानको ०८:२२ बजे